Wasaaradaha Internetka - Kooxdayada Adeegyada
Waxaan u heegan iyo naxariis ku saabsan adeegidda qoyska Ilaah iyo kuwa ku raadinaya Rabbiga. Wasaaradaha Internetka ayaa loo abuuray inay dhiirigeliyaan ayna u qalabeeyaan quduusiinta u adeega iyaga oo ku guuleysta nafsad ahaanshaha Masiixa.
"Marwalba ogow in Ilaah uu gaari karo gaarigaaga!"
Olga iyo anigu waxaan ku faraxsanahay mustaqbalka kaniisadaha Masiixa. Kumanaan qof ayaa u yimid Masiixa muddo labaatan sanno ah oo aan ku jirnay internetka aduunka. Qof kasta oo maalin kasta ah iyo dad badanba waxay raadinayaan runta ku saabsan ereyga Ilaah iyo Kaniisadda Rabbiga. Waxaan ballanqaadeynaa in aan ugu dadaalno inaan u adeegno Rabbiga iyo qoyska Ilaah. Qof kasta waa qaali Rabbiga hortiisa, waxaana dooneynaa inaanu dadka oo dhan wadaagno injiilka Masiixa. Waa baryadeenna in aad uugu dhowaan doonto Ilaah markaad ku sii barato aqoonta ereyga Ilaah iyo dhammaystirka buuxda ee Masiixa.
Iyada oo caawinaadda Ilaah waxaynu ku dadaali doonnaa inaan ku siino qalabka iyo aqoonta loo baahan yahay in lagu faafiyo injiilka Ciise Masiix qof kasta oo aduunka ka mid ah. Ku adkow Rabbiga iyo xooggiisa xooggiisa. Ciise wuu idin jecel yahay!
Agaasimaha / Aasaasaha
Hammond Burke waa Agaasimaha Kaniisada Isku-xidhka Masiixiga - COCBN online at www.cocbn.com.
Brother Hammond waxay ku biirtay Wasaaradaha Internetka iyagoo dadaal wadaag ah si kor loogu qaado wacdinta caalamka iyada oo loo marayo internetka. In ka badan laba iyo toban sano wuxuu ka caawiyay ururo badan oo leh baahiyahooda teknoolajiyada. Waxa uu horay u ahaa habka loogu talagalay fiidiyowga soo noolaynta kiniisadaha Masiixa oo ka bilowda Kiniisadda Mountain View of Christ ee Dallas, Texas. Hammond Burke iyo Silbano Garcia, II waxay ka wada shaqeynayeen dib-u-dhiska iyo horumarinta Wasaaradaha Internetka ee kaabayaasha shabakadda.
"Labadan wasaaradood waxay isugu yimaadeen si ay u siiyaan kaniisadaha Masiixa ee ugu dambeeyay ee tiknoolijiyadda warbaahinta iyo websaydhka, waxaan aad ugu faraxsanahay maalmaha iyo sannadaha soo socda si aan u caawinno kaniisadaha Masiixa ku faafay injiilka adeegsiga tiknoolajiyada iyo farsamada casriga ah Hadafkayagu waa inaan dejinno heerarka iyo hababka u oggolaanaya shaqaalaha kaniisaddu in ay diiradda saaraan wasaaradda iyadoo adeegsanaysa qalabyadayada ujeedada ay u leeyihiin. " - Hammond Burke
Michael Clark wuxuu u adeegay Wasaarada Internetka iyadoo loo yaqaan la-taliyaha teknoolajiyada kombiyuutarka tan iyo 1997. Brother Michael wuxuu helay khibrad gaaraya labaatan iyo saddex sano oo ku yaala tiknoolijiyada kombiyuutarka. Michael wuxuu u shaqeeyay sidii falanqaynta Nidaamyada Nidaamka La Xiriira (Systems Analyst for Sprint), oo ah La-taliye sare oo ah Winward IT Solutions, oo ah Maamulaha Nidaamka Isku-xirka ee Verizon, wuxuuna u adeegay sidii uu yahay Engineer Network.
Sanado badan Michael wuxuu si fiican u adeegay. In 1997 wuxuu ahaa qalab lagu soo bandhigayo Nidaamka Nidaamyada Windows NT ee Microsoft iyo kadibna Nidaamka Nidaamyada Macmiilka Microsoft. Markaa kadib waxaan go'aansanay inaan ka guurno Nidaamka Nidaamyada Unix ee Microsoft Windows NT. Maanta waxaan ku soo laabannay dunida Unix si loo badbaadiyo kharashka hawlgalka. Waxaan ku tiirsanaan karnaa Michael ee xoogga leh ee xirfadaha IT Solutions iyo Network Engineering.
Wasaaradaha Internetka ayaa barakeysan si ay u helaan isaga oo ah la taliye teknoolijiyada kombiyuutarada. Michael Clark waa Masiixi aamin ah oo xubin ka ah kaniisadda Saturn ee Masiixa ee Garland, Texas. Waxa kale oo uu u adeegaa sida Xabsiyada Xabsiga ee Dallas, Texas.
Kadib markii uu u shaqeynayay 10 sanadka USN, waxaa laga sii daayay shaqo kaamil ah [oo mar dambe hawlgabkeedu yahay LCDR, USNR]. Sannadkan 23 ee xiga ayaa la shaqeynayay Eastman Kodak Co ee Rochester, NY. Shaqadaydu waxay ahayd Engineer Koronto ah oo ku lug leh naqshadeynta alaabada iyo wax soo saarka ee Qaybta Ganacsiga iyo Xirfadlaha Xirfadleyda. Hawlgalkayga labaad wuxuu ka yimid Eastman Kodak Management da'da 52.
Wax ku saabsan 10 sano ka hor, waxaan ka soo wacey call Rabbigeena iyo aabahay in aan isticmaalo talooyinkayga waxaanan dhistaa oo ilaaliyaa bogagga. Kumbuyuutarradu waxay ahaayeen qalab xafiis oo weyn oo aan ka ahaa sanadka 50 hadda. Inta lagu jiro sanadaha soo socda si aan u soo bandhigo, waxaan soo dejiyey bogag intarneedka ah ee saaxiibada iyo kaniisadaha. Ka dib markii kaniisadaha Isku-xidhka Internetka ee internetka lagu helo, aniga iyo xaaskeyga waxaa la baabtiisay kaniisada Deltona ee Masiixa Juun 2014. Waxaad ka arki kartaa boggeena maxalliga ah iyo bogga Facebook [aan sameeyay], adigoo gujinaya halkan www.deltona-church-of-christ.org
Internetku wuxuu bixiyaa hab isgaadhsiin deg deg ah oo ku saabsan adduunka. Jiilasha hadda iyo kuwa cusubi waxay bartaan sida loo isticmaalo kheyraadkaan. Waxaannu nahay, wacdiyeyaashu, waa inay u adeegsadaan khayraadkan si ay ragga iyo dumarkaba ugu keenaan kiniisadaheena si ay u bartaan Rabbigeenna Badbaadiyeheenna, Ciise. Tani waa wicitaankeyga waana natiijooyin caddaynaya.
Olga Garcia wuxuu door muhiim ah ka ciyaaraa howlaha maalinlaha ah ee Wasaarada Internetka. Waxay u adeegtaa xoghayaha Wasaarada Internetka. Waxaan maalin kasta heli doonaa boqolaal emails ah, Olga wuxuu naga caawiyaa in aan ka jawaabno emails haweenka iyo gabdhaha dhallinyarada adduunka. Hooyada dhashay Olga ayaa hadda baraneysa in ay la shaqeyso tiro tiknoolajiyado horumarineed oo cusub oo ka faa'iideysan doona Wasaaradaha Internetka iyo kaniisadaha Masiixa ee internetka. Waxaan runtii ku faraxsanahay inaan heysano kooxdeena.
"Wasaaradaha Internetka waa gaari aad u fiican oo aduunka oo dhan la shaqeeya injiilka Ciise Masiix, waxaan rabaa in aan sameeyo wax alla wixii aan awoodo inaan u adeego Rabbiga iyo boqortooyadiisa, Ilaahay waa cabsi!" - Olga Garcia